Madaxweynaha Jubbaland oo war ka soo saaray saameynta fatahaadaha ay reebeen, kuna baaqay… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Jubbaland oo war ka soo saaray saameynta fatahaadaha ay reebeen, kuna...
Madaxweynaha Jubbaland oo war ka soo saaray saameynta fatahaadaha ay reebeen, kuna baaqay…
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxwaynaha maamulka Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo maanta shir guddoomiyey kulanka guddiga ka hortagga COVID-19 ee Jubbaland ayaa warbixin ka dhagaystay guddiga iyo waxyaabihii u qabsoomay guddiga tan iyo intii uu dhisnaa.
Axmed Madoobe ayaa saddex gobood oo cusub sheegay in Dowladdu u asteysay in loo isticmaalo xarumaha karantiilka ah, xarumahaas ayaa waxaa kamid ah xarunta dhalinyarada, xarunta caafimaadka ee Maxfalka iyo xarunta saddexaad oo ah xarunta xannaanada digaaga ee ku taala duleedka magaalada Kismaayo.
Sidoo kale, madaxweynaha Jubbaland ayaa Dowladda federaalka Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed iyo beesha Caalamka ugu baaqay in ay ka qayb qataan taakuleynta iyo u gargaaridda dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaadaha.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa intaas ku daray in uu magacaabayo guddi ka shaqayn doona gurmadka iyo taakuleynta dadkaas.
Ugu dambeyn, Axmed Madoobe ayaa dhanka kale ammaanay guddigii nabadeynta beelihii walaalaha ahaa ee dhawaan dirirtu ku dhexmartay deegaannada koonfureed ee magaalada Kismaayo, waxaana uu faray in howlaha xasilinta la dhameeyo la iskuna keeno salaadiinta iyo nabadoonada beelihii dagaalama.
war ka soo saaray
AKHRISO: Guddiga Hirgelinta Doorashada Heer Federaal oo war ka soo saaray Doorashooyinka Dalka
Maxaa ka soo baxay kulankii Madaxweyne Farmaajo iyo Wasiirka Difaaca dalka Ingiriiska? +(SAWIRO)
DHAGEYSO: DF Somaliya oo ku gacan seyrtey go’aan ka soo baxay guddiga xaqiiqo raadinta IGAD
Somalia dismisses IGAD report, says ‘influenced’ by Kenya
Halqaran - January 27, 2021 0
Somali federal government on Wednesday dismissed findings of a report from IGAD team sent to the border between Somalia and Kenya. In a press conference...
Uganda rescinds earlier report of killing 189 al-Shabaab fighters
Turkey extends troop deployment in Somalia’s waters
Somalia’s Finance Minister says was misquoted, Kenyan khat ban stands
Somali Region Investment Forum opens in Jigjiga